Dagaalkii 5aad ee Casriga ah: Muuqaalka Madoobaadka waa la heli karaa | Wararka IPhone
Gameloft waxay daabacdaa filimka 'Combat Modern' 5: Blackout '
Alex Ruiz | | Ciyaaraha IPhone
Shirkadda ciyaarta fiidiyowga ee qalabka mobilada Gameloft ayaa sii deysay fiidiyow cusub oo ah trailer ah oo na tusinaya muuqaallo ka soo baxa soo socda, 5 Dagaalamo Modern: mugdiga. Ciyaarta waxaa loo sii deyn doonaa labada qalab ee iOS iyo Android Khamiista soo socota. 24 bisha Luuliyo waana hubaal inay si dhakhso leh u gaari doonto jagooyinka ugu sareeya qiimeynta codsiyada lacag bixinta ee ugu badan lasoo dejiyey Sida aan ka arki karno fiidiyowga, shirkadda ayaa abuurtay qaybtii shanaad ee sagaalka Dagaal Casri ah oo leh qiyaaso badan oo ficil iyo muuqaallo muuqaal ah. Sida noocyadii hore, waxaa naloo soo bandhigi doonaa laba nooc oo ciyaar ah, hal iyo ciyaartoy badan.
Marka lagu daro sheeko cusub, Dagaalka cusub ee casriga 5: Madoobaadka ayaa u muuqda mid inta badan u gaar ah sawirada la hagaajiyay, sameynaya wax aan loo maleyn karin dhammaanteen haddii aan dib u laabanno sannado, si aan u awoodno inaan ugu ciyaarno ciyaar fiidiyow ah taleefannadeena casriga ah ama kiniin leh tayada muuqaalka sida haddii ay tahay jaan-goynta jiilka soo socda ee fiidiyoowga ciyaarta. Riwaayad kale oo si wanaagsan loo soo dhaweyn doono waa fikradda ah kooxahaIllaa 20 ciyaartoy oo ku jira liiska saaxiibadood ee ay la abuurayaan ciyaaro shaqsi ahaaneed, sida ay tahay dhacdooyinka fiidiyoowga fiidiyoowga ah sida Battlefield ama Call Of Dutty.
Dagaalkii 5aad ee Casriga: Madoobaadka waxaa ka mid ah afar fasal oo dabeecad cusub ah xulashadeena loogu talagalay ciyaartoy badan, sida ay yihiin askari, tracker, dabley y dhuujin sida ay ugu habboon yihiin ciyaarteenna ciyaareed. Shaki la'aan qaybtan cusubi waxay noqoneysaa mid guuleysata oo waxaan noqon karnaa isaga hortiisa ugu fiican FPS ee iPhone iyo iPad. Waxaa lagu qiimayn doonaa 5,99 euros, sida lacag bixin hal mar ah, maadaama aysan ku jirin wax soo iibsiga barnaamijka. Waan kula socodsiin doonaa marka ciyaarta laga heli karo App Store si aad u soo dejiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » Gameloft waxay daabacdaa filimka 'Combat Modern' 5: Blackout '
Ciyaar Weyn, waan ciyaarayaa waana wax lala yaabo
Rafael Alfonzo Valero Abarca dijo
Alex! Sideed ugala soo degtay haddii ay iibinayso Khamiista soo socota 24 ???
Jawaab Rafael Alfonzo Valero Abarca
Su’aasha ugu dambeysa Alex! Immisa boos (MB / GB) ayuu ku fadhiyaa taleefanka?
Waxay ku fadhidaa 1 Gb iyo saaxiib yar
runtii aleex ma shaqeeyaa? su'aal ma taageertaa ilaaliyayaasha hore?
Ku jawaab estiif
Uma diro wax fikrad ah hada saaxiib, ka waran hadii ciyaartu sifiican u shaqeyso hadii ay jirto nooc dhibaato ah
Sida loo hagaajiyo maqnaanshaha ama aan la isku hagaajin xiriirada iCloud ee ku jira macruufka 7.1.2
Maareeyaha Faylka Filza: tartan toos ah ee iFile (Cydia)